Joglo: Situs Lowongan Kerja Indonesia
JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia Karazana fialana hafa dia fanesorana. Ny asa karama dia ny fifandraisana ara-tsosialy sy ara-ekonomika eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa, ka ny mpiasa dia mivarotra ny asany amin'ny fifanarahana ara-dalana na tsy ara-dalana. Amin'ny ankapobeny dia matetika no hita any amin'ny tsenan'ny asa ireny karama ireny. Ho takalon'ny karama karama, ny vokatra asa dia nanjary lasa ny tsy fanamafisana ny fananan'ny mpampiasa, afa-tsy amin'ny tranga manokana toy ny fametrahana patanty momba ny fananana ara-tsaina any Etazonia izay matetika amboamboarina ny zon'ny patent ao amin'ny mpamorona azy voalohany. Ny mpiasa iray karama dia olona iray izay midadasika indrindra amin'ny vola miditra amin'ny fivarotana ny asany amin'ny fomba toy izany. Amin'izao toe-karena maoderina maoderina toy ny an'ny OECD izao, izao no rafitra ambony indrindra amin'ny rafitra fiasa. Na dia misy aza ny ankamaroan'ny asa aorian'ity rafitra ity, ny fandaharan'asan'ny CEOs, ny mpiasa matihanina, ary ny mpiasan'ny fifanekena dia indraindray mifandraika amin'ny andraikitry ny kilasy, ka ny "karama asa" dia heverina fa tsy ampiasaina afa-tsy amin'ny asa tsy mahomby, semi-skilled na manual.
Ny asa karama, araka ny asam-panjakana napetraka eo ambany sehatra ara-toekarena androany, dia voatsikera, indrindra ireo sosialista malaza sy anarcho-syndicalists, mampiasa ny fehezan-teny momba ny fanandevozana. Ireo sosista dia manatsara ny fifandraisana eo amin'ny varotra ny asa ho toy ny entam-barotra sy ny fanandevozana. Cicero koa dia fantatra fa nanolotra sosokevitra toy izany. Ilay filozofa Amerikana John Dewey dia nametraka fa mandra-pidin'ny "demokrasia indostrialy" ny "feodalisma indostrialy", ny politika dia ho "aloky ny tombontsoan'ny fiarahamonina". Thomas Ferguson dia namoaka lahatsoratra momba ny fampiroboroboana ny antoko fa ny tsy fahombiazan'ny toekarena ara-ekonomika eo ambany kapitalisma dia mahatonga ny fifidianana ho tonga fotoana ifanakalozana sy hifaninana hifehy ny fanjakana. Ny tanora tanora dia mety hitera-doza ho an'ny fahasimbana eo amin'ny asa ary miatrika loza mety hitranga amin'ny asa ambony kokoa; Amin'ny ankapobeny, noho ny asany amin'ny orinasa avo lozisialy izany. Ohatra, any Etazonia, ny tanora dia naratra nandritra ny dingana roa isaky ny tahan'ny zokiny antitra. JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia
Diposting oleh Tjanpu di 02.43